IRequa Inn ~ Igumbi leBoat Creek ~ River Front View
UBookStayHop unezimvo eziyi-5291 zezinye iindawo.
Yakhiwa ngo-1914, le ndawo yondwendwe yembali ibekwe phezulu kwiNduli yeRequa phakathi kwemithi emidala ebomvu eRedwood National Park apho uMlambo iKlamath udibana nolwandle. Ipropathi iquka indawo yokulala enamagumbi ayi-14 ahlukeneyo, indlu enamagumbi amathathu okulala, kunye nendlwana encinci. Izitiya zeentyatyambo ezenziwe ngobuchule, iindlela zokuhamba, iimbono zemilambo, kunye noxolo kunye nokuzola kwehlathi kubonelela ngasemva okugqibeleleyo kwendawo yokubalekela kumhlaba wakudala wesizwe saseYurok.
Ifakwe kumgangatho wesibini we-Inn, iRequa Boat Creek Room, eyayifudula ibizwa ngokuba yiGumbi #14, inombono womlambo, ukukhanya okuthandekayo kwendalo, ibhedi yenkosi, kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite elineshawa yokuhamba. Le suite ithandekayo ikwabonisa isinxibo esincinci kunye namampunge, kunye nendawo entle yokuhlala ejonge uMlambo iKlamath igcwele izitulo ezi-2 ezisemva kunye netafile yekofu.
Izimvo eziyi-5 299